မြန်မာပြည်တွင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
မောင်မောင်စိုး ● လွမ်းရစ်ဝေသော နေ့များ ညများ ဘဝပေါင်းများစွာ - အပိုင်း (၃၀)
မောင်မော်ကွန်း - ကြွက်နဲ့ကြောင်
ကာတွန်း ATH - အသားပါသလား ငါးပါသလား
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ ချွတ်ရောင်းမလား …
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ ချွတ်ရောင်းမလား … (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဝါကျဖြူ – မျက်လှည့် သေတ္တာ
KT# မျက်လှည့် သေတ္တာ ဝါကျဖြူ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၉ သတင်းစာတွေထဲကို စကားလုံးတွေဖိသိပ်ထိုးထည့်ပစ်လိုက်ကြတဲ့အခါ မင်ဘူးအမည်းတွေထဲမှာ တိမ်ညိုဆိုင်းနေတဲ့မိုးဥတုတွေက ကြပ်ခိုတွေအဖြစ် အဆက်မပြတ်ရွာနေတော့တာပါပဲ ။ ဘယ်သူမှလည်း ဂရုမပြုမိကြဘူးထင်ပါရဲ့ ။ ဂရုပြုမိခဲ့ရင်တောင်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မျက်ဝန်းပေါ်ကျော်ဖြတ်လိုက်မိတဲ့...
နွမ်းလျရုပ်​ပုံလွှာ(၁) -ဖိုးရှမ်း ကျော်ကျော်မြရည်စမ်း (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၉ သူ့အမည်​မှာ ဖိုးရှမ်းဟုသိခဲ့ရသည်​။ သူနှင့်​ကျွန်​​တော်သ​ည်​ မြန်​မာပြည်​​မြောက်​ပိုင်းရှိ ဘူတာရုံ​လေးတ​ရုံ၌ တွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်​သည်​။ ထို​နေ့က ​ကျောက်​စိမ်း​မှော်​တခုသို့ ကျွန်​​တော်​သွားလိုသည်​။ ထို​အရပ်​၌ရှိ​သော...
မုဒိတာ(တောင်သာ) – FB ဖေ့ဘုတ်နဲ့ မျက်နှာသစ်ကြသူများ
FB ဖေ့ဘုတ်နဲ့ မျက်နှာသစ်ကြသူများ မုဒိတာ(တောင်သာ) (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၉ ယနေ့ခေတ်မှာ လူမှုရေးစာမျက်နှာဆိုသော(FB ဖေ့ဘုတ်) ကလူတိုင်းလူတိုင်းသုံးစွဲကြသလို၊ လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ ဘဝ အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ အရာဝင်လာတာကိုတွေ့ ရတယ်။ အဲ့လိုအရာဝင်လာသလို fb...
Poetry Wave အမှတ် ၆ ထွက်ပြီ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၉ ဒီအင် ဒီအားတွေနဲ့ ကဗျာသမား စာသမားတွေ တမြတ်တနိုးပါဝင် ရေးဖွဲ့အားထည့်ထားတဲ့ Poetry Wave အမှတ် ၆...
ကာတွန်း ဆလိုင်းစွမ်းပီရဲ့ အမိန့်ပေးနိုင်သားပဲဟ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
သန်းဝင်းလှိုင် – ကြည့်ကန်ရှင်ကြီး ဘဝနှင့်စာပေ
သန်းဝင်းလှိုင် – ကြည့်ကန်ရှင်ကြီး ဘဝနှင့်စာပေ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၈ ကြည့်ကန်ရှင်ကြီးအမည်ဖြင့် ထင်ရှားသော ကုန်းဘောင် ခေတ် စာဆိုတော်ကား သာမဏေပုဂ္ဂိုလ် ရှင်နန္ဒဓဇ ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး...
နှင်းမှုန်ကြားက တီးတိုးစကားပုံပြင် သက်ဝေ၊ ပန်ဒိုရာ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၉ နှင်းကိုမှ ခူးဆွတ်ပန်ဆင်ချင်သူက ဒီဇင်ဘာရောက်အောင် တစ်နှစ်လုံးစောင့်နေခဲ့သည်။ တကယ်တော့ အချိန်တွေက ကြာခဲ့ပြီ။ သိပ်တော့မထူးပါလေ။ အတိတ်ဆိုတာကလည်း ဝေဝေဝါးဝါး၊...
ကာတွန်း ဆွေသား – လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုရာဝယ်
လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုရာဝယ် ကာတွန်း ဆွေသား (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းရွှေဗိုလ် – သေချာလားအစစ်
သေချာလားအစစ် ကာတွန်းရွှေဗိုလ် (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၁၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
သန်းဝင်းလှိုင် – မြန်မာပြည်၏ မောင့်ဘက်တန်
သန်းဝင်းလှိုင် – မြန်မာပြည်၏ မောင့်ဘက်တန် (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၃၊ ၂၀၁၉ မောင့်ဘက်တန်သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံးခါနီး၌ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့သော မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု ၏ စစ်သေနာပတိချုပ် ဖြစ်သည်။ စစ်ပြီးခါစတွင် မြန်မာပြည်...
Leo Beranek ဂျူနီယာဝင်း – ငရဲခန်းတဖြစ်လဲ အလုပ်ခန်း (အတွေးအမြင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈) မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၈(2001 ခုနှစ်ထုတ် M. Mitchell Waldrop (အမ် မီချယ်...
Page3of 193«12345...193»